Fandoavam-bola tsy mety mpandraharaha mivatra Bitcoin - Blockchain News
Fandoavam-bola Processor mivatra mba Hifarana Support for Bitcoin
Ny fandoavam-bola mivatra mpandraharaha nanambara fa handao bitcoin ao anatin'ny telo volana manaraka, ary miala tanteraka izany tamin'ny Aprily 23. Izany no nitatitra ny vokatra Tom Carlo mpitantana ao amin'ny orinasa bilaogy ofisialy.
Nanomboka mivatra manohana bitcoin fifanakalozana amin'ny 2015, manome fidirana amin'ny fandoavam-bola amin'ny BitCoins bebe kokoa noho ny 60 firenena. Na izany aza, ela ny raharaham-barotra fanodinana, ny fitomboana teo amin'ny isan'ny nahomby varotra sy mitombo vesatra natao bitcoin tsy dia malaza eo mivatra mpampiasa: “Bitcoin no very ianarantsika avy ho an'ny mpampiasa. Miara-miasa ara-barotra ihany koa ny orinasa, ka nandray ny tsy fidiram-bola avy amin'ny bitcoin, “- hoy i Carlo.
Tom Carlo nanamarika fa mivatra “optimistically Mijery crypto-vola amin'ny ankapobeny” ary, mety, amin'ny hoavy hanohana more altcoins, anisan'izany ny kintana, raha ny vola madinika lasa malaza kokoa. Ankoatry ny, mahita ny fomba fijery toy izany tetikasa tahaka ny helatra, OmiseGO, Ethereum, Bitcoin Cash sy Litecoin.
Maro ireo mpampiasa tambajotra nanohana ny fanompoana vahaolana:
Bitcoin dia lehibe, revolisionera mihitsy aza fa misy haingana, mora kokoa #cryptocurrencies zavatra maro avy any ankehitriny. Tonga ny fotoana mba hanaovana ny vaovao eo amin'ny andian-tsoratra ankizy # StellarLumens #Ethereum
Na dia ny sasany mihevitra izany fohy-mijery lavitra fihetsika Ny alina nialoha ny helatra sy ny scalability vahaolana ho an'ny tambajotra Bitcoin, mpampiasa indrindra mbola mino fa maro ny cryptocurrencies izay afaka mifaninana amin'ny bitcoin.
Tsy misy fomba mba hanolotra izany vaovao mivatra toy ny vaovao tsara. Ankapobeny isika milaza adopter rehetra tany am-boalohany izy ireo mpivarotra izay nanao izany ny "fomba ratsy" ary ankehitriny efa ho retool hanampy tselatra Network. Fa tsy ry zareo. Tsy nampihetsi-po zareo ny Bitcoin vola (na hafa) na. Zareo mandao
Aza mihodina vorontsiloza io hoe "izany no tsy natao ho an'ny vola fa zavatra hafa", Midika izany fa isika Ho voatery hiandry mandra-tontolo iainana dia vonona indray izy ary avy eo dia te-mitory ny olona rehetra indray, rehefa saram ambany indray. Mihatra amin'ny rehetra izany vola madinika, ethereum dia tsy "vonona" na.
Ny andian-tsoratra fetra tokony ho natsangana roa taona lasa izay, fony tsy mbola nisy izany tena lasa olana, ary efa nividy Te fotoana. Fa ny olona sasany FUD'ed momba ny hoavy an'eritreritra olana mba hivarotra ny hoavy vahaolana izay tsy vonona, ary namorona tena olana be eo amin'ny ankehitriny. /Mitabataba
Alex ny Sande @avsa
Tany am-piandohan'ny volana Desambra, ny bitcoin-fandoavam-bola dia nihena ny Steam lalao service. Koa ny fandalovana amin'ny Ethereum andian-tsoratra ho hizaha kintana efa nanambara ny Tale Jeneralin'ny Kik iraka Ted Livingston. Araka ny azy, Ethereum “miezaka ny ho zava-drehetra ho an'ny rehetra”, koa tena tototry ny, ary tsy manefa ny zavatra ilain'ny ny fangatahana miaraka amin'ny 10,000 mpampiasa.
California mpanao lalàna Nampahafantatra volavolan-dalàna vaovao ao amin'ny Bitcoin sy Blockchain
California State lalàna ...
Previous Post:Robotrading na boky fampianarana Trading
Next Post:Blockchain News 25 Janoary 2018